I-Luxury Condo Horizon 1, Amazing Ocean View/Wifi/AC
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Christian Et Nadia
I-Horizon Lodge iyindawo ekahle yokuphumula phakathi kwaleli pharadesi elincane, elinombono omangalisayo olwandle, iFlamingo Bay, amagquma azungezile kanye nohlaza oluluhlaza. Kunokuthula kangangoba umsindo nje lapha ngowezinyoni nezinkawu ezikhalayo. Uzozizwa usekhaya.
I-Condo ihlome ngokuphelele, okuhlanganisa i-infinity pool, i-WIFI engenamkhawulo, i-A/C, ukufinyelela okuvikelekile ngesango elizenzakalelayo nokunye okwengeziwe, ukuze wenze isiqiniseko sokuthi ukuhlala kwakho kuzoba ntofontofo futhi kukhumbuleke ngangokunokwenzeka!
I-Horizon Lodge iyi-Condo yesimanje futhi kanokusho yakhelwe ukunethezeka nempilo yakho yonke. Itholakala egqumeni elincane phakathi kwehlathi eliluhlaza laleli pharadesi elincane, lihlala liseduze nazo zonke izinsiza (amabhishi, izindawo zokudlela, izitolo, imisebenzi, isikhumulo sezindiza)...
Ifulethi lifakwe ngokuphelele nakho konke ozokudinga. Ukunethezeka, ukuhlanzeka kanye nemfihlo kuzokulinda!
I-condo futhi ine-infinity pool kanye namadekhi amasha angu-2 anokubukwa okumangalisayo kolwandle ukuze uphumule noma wenze umdlalo othile onjenge-TRX ne-yoga phakathi nemvelo.
Yini enye ongayicela?
5.0(31 okushiwo abanye)
Asinabo omakhelwane abaseduze nendawo yethu, ezinye izindlu ezimbalwa nje ezikude ongakwazi nokuzibona. Ukubuka okumangalisayo kungokwakho ngokuqinisekile!
Asikho isicefe ngomsindo wezimoto noma uthuli lomgwaqo njengoba siqhelelene kakhulu naleli gquma elincane. Izilwane kuphela ezingakuvusa.
Ibungazwe ngu-Christian Et Nadia
Sizoba onawo nganoma imiphi imibuzo, futhi uma uthanda imisebenzi singakweluleka nawe.
Futhi, uChris unesikhungo sakhe se-PADI dive. Zitholele i-scuba diving, ukwakheka, uhambo lolwandle, nokunye okuningi kuyatholakala, kanye nohambo lwe-snorkeling. Kusukela ogwini noma esikebheni.
Futhi sinezilinganiso ezikhangayo zokuhamba ngebhayisikili elinesine, ukugibela amahhashi, ukushushuluza indiza, ukugibela izikebhe, uhambo lwe-catamaran nokudla okugibele ukushona kwelanga, njll.
Futhi, uChris unesikhungo sakhe se-PADI dive. Zitholele i-scuba diving, ukwakheka,…
UChristian Et Nadia Ungumbungazi ovelele